Anthony Boyle wuxuu ku biirayaa Jilayaasha Masters-ka Hawada ee TV-ga Apple + | Waxaan ka socdaa mac
Anthony Boyle wuxuu ku biirayaa jilayaasha Masters-ka hawada ee Apple TV +
Apple ayaa ka fikireysay wax soo saarka Masters of Air laga soo bilaabo Oktoobar 2019, markii uu ku dhawaaqay mashruucan, mashruuc si tartiib tartiib ah u soo socda. Toddobaadyo ka hor, waxaan kugu soo wargelinnay adiga ku biirista jilayaasha taxanahan yar ee Austin Butler iyo Callum Turner.
Jilayaashaas, hadda waa inaan ku darnaa Anthony Boyle, sida ay ka yiraahdeen kala duwan. Boyle wuxuu caan ku yahay doorkiisa Z, magaalada lumay, laatiinka ah y Agatha Christie: Dambi La'aan wuxuuna ciyaari doonaa doorka Taliye Crosby.
Masters of Air noqon doonaa wasaarad ka dhacda Dagaalkii Labaad ee Adduunka waana kan sii wadida Walaalo dhiig y Pacific, oo ay labaduba soo saareen Steven Spielberg iyo Tom Hanks, oo iyaguna iyagu ka dambeeya soosaarkan.
Wasaarado wuxuu ku saleysan yahay buugga isla magaca oo uu qoray Donald L. Miller, waa buug "raacaya sheekada dhabta ah ee qotada dheer ee shaqsiyadeed ee dab-damiyeyaashii Mareykanka ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee dagaalka keenay albaabka Hitler."
Cinwaanka, waxaan ka helaynaa Cary Joji Fukunaga, oo ah ayaa hagaya 3da qaybood ee ugu horeeya, isagoo ahaa shaqadiisii ​​ugu horreysay ee agaasime ka dib markii uu dhammeeyay qeybtii ugu dambeysay ee filimkii 007 Waqti loo dhinto
Fukunaga ayaa soo agaasimay qaybo ka mid ah taxanaha Baadhista runta ah wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Emmy ee Agaasimihii Wanaagsanaa ee Riwaayadaha Taxanaha ah. Sanadkii 2009 wuxuu gudoomay abaalmarinta Directorka ugu wanaagsan xafladii Sundance Film Festival ee filimka No Name.
Haddii aadan fursad u helin inaad aragto Walaalaha Dhiigga ama Baasifigga weli, waad awoodaa hadaad haysato rukunka HBO, madal soo saartay labadaba taxane ah oo ay ku guuleysatay tiro aad u badan oo Emmy Awards.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Anthony Boyle wuxuu ku biirayaa jilayaasha Masters-ka hawada ee Apple TV +
Dukaammada Apple qaarkood waxay horeyba kuu oggolaadeen inaad tijaabiso AirPods kahor intaadan iibsan